“Waxay Ahayd Waqti Mucjiso Uu Sameeyey Mane, Isaga Ayaa Khasaaraha Noo Geystay, Laakiin..” | Somali football world
Home SOOMAALI “Waxay Ahayd Waqti Mucjiso Uu Sameeyey Mane, Isaga Ayaa Khasaaraha Noo Geystay,...
“Waxay Ahayd Waqti Mucjiso Uu Sameeyey Mane, Isaga Ayaa Khasaaraha Noo Geystay, Laakiin..”
Tababaraha kooxda kubadda cagta Norwich Ciyty, Daniel Farke ayaa ka hadlay waqti uu ku tilmaamay mucjiso oo uu beddel kusoo galay xiddiga reer Senegal ee Sadio Mane, isla markaana uu 25 dhibcood ka dhigtay tirada dhibcaha ay kooxdiisu hoggaanka ku hayso.
Mane ayaa beddel kusoo galay ciyaartii xalay ee Carrow Road, isaga oo kasoo laabtay dhaawac uu muddo ku maqnaa, waxaana markiiba la dareemay saamayntiisa iyadoo uu culayska ka furtay Reds oo awoodi kari la’ayd inay jabiso difaacii derbiga ayaa ahaa ee Norwich ay soo dhistay.
Mane ayaa isla markii uu garoonka soo galay, waxa uu abuuray weerar halis ah, waxaana garabka bidix oo soo yara taagnaa uu noqday halka ay kubadda Reds ka dhaqaaqayso, ugu dambayntiina daqiiqaddii 12aad ayuu noqday laacibka guulaha xidhiidhka ah usii kordhiyey kooxdiisa.
Kubadd uu dhexda kasoo tuuray Jordan Henderson ayaa waxa uu Sadio ku dhex maamulay laba difaac oo Norwich ah waxaanu goolka ka geliyey xagal 11 degree ah, waxaanu goolkaasi noqday midka kaliya ee ciyaarta ka dhashay ee labada kooxood farqiga u noqday.
Ciyaartoyga Norwich ayaa cabasho ka muujiyey iyagoo ku dooday in Mane uu gacan ku riixay difaaca bidix ee Christoph Zimmerman oo isku dayay inuu madax ku difaaco, hase yeeshee garsoore Stuart Attwell iyo VAR waxay isku waafaqeen in aanu wax khalad ah dhicin.
Markii ay ciyaartu dhamaatay, waxa warbaahinta la hadlay tababaraha Norwich City, Farke, waxaanu tilmaamay in ciyaarta ay soo marxalad xilli mucjiso ah oo ahayd daqiiqado uu garoonka ku jiray Sadio Mane, laakiin wax cabasho ah kama keenin goolkii Liverpool guusha u horseeday inkasta oo uu tilmaamay inay iska caddayd in qalad dhacay ka hor intii aanu goolku dhalanin, waxaanu yidhi: “Anigu ma cawdo sababtoo ah xili ciyaareedkan in badan ayaan kasoo bartay VAR in aanu annaga noo shaqaynin. Haddii garsooruhu na siinin khalad ah in Mane uu riixay, markaa miyaanay ahayn in VAR uu meesha ka saaro.”
Intaa kaddib waxa uu xusay tilmaamay mucjisooyinkii uu garoonka lasoo galay Mane, waxaanu yidhi: “Goolka ayuu ogolaaday (Garsooruhu), anaguna waxaanu u malaynaynay in aanay waxba caddayn oo ay u badnayd qalad. Laakiin wax walba waxa sameeyey tayada aan la rumaysan karin ee Mane.
“Wuxuu si dhab ah u garanayaa xilliga ay tahay inuu halkaa tago, in xoogaa lagu yara dhufto difaaca dhexe oo dheelli lagu sameeyo, waxaanay ahayd taabashadii ugu horreysay ee ciyaartoy heer-sare ah iyo dhamaystir heer caalami ah.”
Tababaraha Norwich City, waxa kale oo uu ka hadlay goolhayaha Liverpool, Alisson Becker oo kooxdiisa ka diiday inay dhaliyaan fursado ay heleen, waxaanu yidhi: “Qaybtii hore, waxa jirtay xaalad laba ciyaartoy oo annaga ah ay hor tageen goolhayahooda, waxaanay ahayd inay gool noqoto. Fursadahayagu way ka weynaayeen goolkooda laakiin iyagu awood ayay u yeesheen inay dhaliyaan.
“Taasi waxay ahayd farqiga oo ah tayada shaqsiyeed, sababtoo ah, runtii waxay ahayd waqti mucjiso ah, waana mucjiso ka timid Mane oo annagana khasaare noo geystay.”
Previous articleXASAASI: Man City Oo Laga Yaabo In Laga Xayuubiyo Horyaalkii Ay Ku Guuleysteen 2014 & Warbaahinta Ingiriiska Oo Qatar Kale Kashiftay.
Next articleXOG: Man United Oo Go’aan Adag Ka Gaartay Mustaqbalka Paul Pogba & Labada Xiddig Oo Ay Badalkiisa Keeneyso